सज्जन कुमार सिंह Archives - Fonij Korea
एउटा अनौठा‌े परिघटना घटेको छ काठमाण्डु खाल्टोमा । कालो राजधानि उजेलिएको छ । सधै अध्यारो कालरात्री आज झिलिमिलि छ । मान्छेहरु भित्ताका अन अफ बटनलाई रमाइलो मानेर चेक गरिरहेका छन् । अहो यो बटन जतिबेला फ्याट्ट पार्दा पनि बिजुली झिलिक्क बलेको छ । के अचम्म भयो , पत्यार लागेकै छैन। हैन हामिलार्इ बिजुलीले कतै छक्काएको त हैन ? आज बिजुली आइराख्दा आम नागरिकलाई छक्काउने को रहेछन भन्ने मेसो सबैले पाएका छन। छक्काउने बिजुली नभै स्वार्थका पोका कर्मचारि र भ्रस्ट ब्यक्तिहरु रहेछन ।बिजुली आइराखे पनि मनको लोडसेडिङ गएकै छैनफुर्सदमा
सज्जन कुमार सिंह बिचार / अनुभूति No Comments »
कथा , प्राय फूलहरु चुड्न खोज्छ सानो भाइ । दिदि रोकिरहन्थिन । “फूल टिप्नु हुन्न बाबू , यो टिपेर तिहारमा माला बनाएर तिमिलाइ लगाउनु पर्छ “। भाइ चाहिँ प्राय फूलहरु टिपेर फ्याक्न मन पार्थ्यो । जति धेरै सम्झाउदा पनि भाइ फूलमा गइरहन्थ्यो अनि फूलका मुनाहरु टिपेर फ्याक्दै खेलिरहन्थ्यो । कहिले फूलका केस्राहरु लछारेर भूईभरि पार्थ्यो । यस्तो गर्न पाउँदा भाइ खुसि हुन्थ्यो दिदी दुखि , दिदी केही ठुलि , ज्ञानी पनि। भाइ चाहिँ अबोध थिए । उसले फूलहरु उखलेर चुडेर फालेपछि ,दिदिले भाइले नभेट्ने ठाउमा पनि केही फूलका बोटहरु रोपिनफुर्सदमा
सज्जन कुमार सिंह साहित्य No Comments »
सज्जन कुमार सिंह मेरो एक जना भाइ सुरेश बराईलिले फेसबुक मेसेजमा कुनै एकजना केटिको फोटो पठाए । त्यो तिनै केटि थिईन जो फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा एकाएक हिट भएकि रहिछन । सामाजिक सञ्जालले मान्छेलाई छिन मै सेलिब्रेटि र छिन मै सेलरोटि पनि बनाइदिएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा छाएकि गोरखाकि एक जना युवती कुशुम श्रेस्ठ। उनले तरकारि बोकेर हिड्दै गरेको एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बन्यो । बलिउडकि कुनै चर्चित सेलिब्रेटि जस्तो देखिने स्लिम युवतिले नाम्लो लगाएर तरकारि बोकेको तस्बिर भाइरल बन्नु संयोग नै मान्नुपर्छ । नत उनले कहिल्यै यस्तोफुर्सदमा
कोरियाको मेसिन जिन्दगी
जीवन चलेको छ या त अचल छ ? कैयौ पटक आफैले आफैसंग खन्याउने प्रश्न हो यो । रातमा निद्रा पर्दैन ,सुत्न मन लाग्दैन जब बिहान हुन्छ ,त्यतिबेला उठ्न मन लाग्दैन । यो सु्त्न मन नलाग्ने र उठ्न मन नलाग्ने बिचमा यस्तो प्रतिस्पर्धा चल्छ , मानौ यी दुई बिचमा बिश्वकप चल्दै छ । समय हुदा निद्रा आउनै मान्दैन तर काममा हुदा निद्रा जानै मान्दैन । कस्तो अचम्म को अपवाद छ समय काम र निद्रामा । निद्रा नपुगे शरीरको चालमा रोकावट हुन्छ । रात र निद्रा त दुइजना सौता २ जस्तो बनेका छन्फुर्सदमा
चद्राकोट सेवा समाज कोरियाको मृगौला पिडित सीता काला मगरलाइ एक लाख साठी हजार सहयोग
सउल रोजगारिका शिलशिलामा दक्षिण कोरियामा रहेका केही युवाहरुको सक्रियतामा स्थापित चन्दकोट सेवा समाज कोरियाले गुल्मि शान्तिपुर निवासि मृगौला पिडित सिता काला मगरको उपचारका लागि रु एक लाख ६० हजार रुपैया सहयोग गरेको छ । आर्थिक अबस्था कमजोर भएकि मगरको दुवै मृगौलाले काम नगरेपछि काठमाडौ महाराजगन्ज स्थित टिचिडं हस्पिटलमा उपचारत छिन । समाजका प्रतिनिधिले टिचिङ पुगेर संकलित रकम बिरामि मगरलाइ हस्तान्तरण गरिएको समाजका अभियान्ता बिमल खत्रीले बताए । चद्राकोट सेवा समाजले बिगतमा पनि मृगौला पीडितका र बिरामिका लागि सहयोग रकम जुटाउदै आएको छ। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै राम्रा- राम्रा सामाजिक सहयोगकाफुर्सदमा
सज्जन कुमार सिंह प्रमुख समाचार No Comments »
सेप्टेम्बर ४मा बागलुङ र चितवनको संयुक्त चियापान हुने
सउल -छुसकको अबसर पारि छुसकको पहिलो दिन सेप्टेम्बर १४ मा चितवन सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाले आयोजना गर्न लागेको चितवन धमाका भाग ३ र छुसकको दोस्रो दिन सेप्टेम्बर १५ मा बागलुङ सम्पर्क समितिले आयोजना गर्न लागेको धौंलागिरि सांगितिक सौगात भाग ३ को तयारि र बिबिध पक्षबारे जानकारि दिने उद्दे्यले सेप्टेम्बर ४ तारिख आइतबार बागलुङ सम्पर्क समिति र चितवन सम्पर्क समितिले सयुक्त रुपमा चियापन तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेका छन । कार्यक्रम सभ्य र भब्य रुपमा सफल बनाउन कोरियाबासि सबै नेपालीलार्इ सहभागिता गराउन साथै आपसि एकताको सन्देश प्रवाह गराउन सयुक्त रुपमा चियापानफुर्सदमा
सज्जन कुमार सिंह रोचक खबर No Comments »
कोरियामा माछापुच्छ्रे पुरुष – महिला भलिबलको उपाधी म्याग्दिलाई
सउल कास्की परिवार दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको माछापुच्छ्रे रनिङ शिल्ड पुरुष महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधी म्याग्दि प्रवासि संघ (मोना ) ले चुमेको छ । पुरुष भलिबलको फाइनल खेलमा बागलुङ सम्पर्क समिती संग कडा प्रतिस्पर्धाका बिच उपाधि आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो । खेलको पहिलो सेट बागलुङले जिते पनि दोस्रो र तेश्रो सेट लगातार म्याग्दिले जितेर उपाधी सुनिश्चित गर्यो । यश अघिका खेलहरुमा उपाधि चुम्दै आएको बागलुङ यसपाली उपबिजेतामा चित्त बुझाउन बाध्य भयो । म्याग्दिले सेमिफाइनल उपाधिको अर्को दाबेदार मानिएको कास्किलाइ र बागलुङले नेपाल मगर संघलाइ हराएको थियो। बिजयि टिम म्याग्दिले १२फुर्सदमा
सज्जन कुमार सिंह खेलकुद No Comments »
अहिेलेसम्मका उपलब्धि रक्षाका लागि काग्रेससंग सयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता भयो ..आहुति
सउल नेकपा माओवादि केन्द्रका स्थाइ समिति सदस्य बिश्वभक्त दुलाला (आहुतिलें ७० बर्षदेखि नेपालमा विभिन्न तबरले भएका आन्दोलन र बलिदानीले प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षा र राजनैतिक संकट समाधानकालागि काग्रेससंग बाध्यत्मक सहकार्य गरिएको बताए । जनअधिकार मञ्च दक्षिण कोरियाको चौथो एकता महाधिवेशन उद्घाटा गर्दै नेता आहुतिले उक्त कुरा बताएका हुन । अहिले सबैले भने जति नै हक अधिकार प्राप्त नभए पनि लामो बलिदानिले गणतन्त्र, समावेशि समानुपातिक प्रतिनिधित्व ,धर्म निरपक्षेता , संघियता महत्वपूर्ण कुराहरु प्राप्त गरिएकाले त्यि उपलब्ध रक्षाकालागि संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने कुरामा जोड दिए। बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित कुरालाई चटक्कै बिर्सेर फुर्सदमा
लाश र राहत माथि राजनिति नगर सरकार
सोल-यति ठुलो पीडा देशले पहिलो पटक भोगेको छ । देश र नागरिकले सुख र शान्ति कहिल्यै पाएनन् ।अभागि हामी नेपाली सधै आसु वेदना र अभावमा नै बांच्यौ यति हुदाहुँदै पनि हामीले मर्न पनि सुखले पाएनौ । देशमा चरम पीडा छ तर उपयुक्त सामाग्रि र यातायातका अभावमा ग्रामिण भेगमा उद्दार कठिनाइ छ । जता हेर्यौ त्यता चीत्कार मात्रै छ । तर सरकार कता छ कुनै अनुभुति छैन ।सरकार प्रमुखहरु र मन्त्रीहरु आफु आफ्ना आफन्त बाचेको खुसीयाली मनाउदै छन् । नत प्रधानमन्त्री कुनै जिल्ला पुगेका छन । नत अन्य अधिकांस मन्त्री नैफुर्सदमा